တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည်ပမှကုမ္ပဏီများလာရောက်၍ လုပ်ငန်းများ ထူထောင်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအား ကြည့်ရှု့နိုင်မည့် web link များ - MyanTrade
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည်ပမှကုမ္ပဏီများလာရောက်၍ လုပ်ငန်းများ ထူထောင်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအား ကြည့်ရှု့နိုင်မည့် web link များ
ကမ္ဘာ့ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း အမြင့်ဆုံးစီးပွားရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အများဆုံးတင်ပို့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအမြင့်ဆုံးစားသုံးသူစျေးကွက်ရှိပြီး ကုန်ပစ္စည်းများအား ဒုတိယအများဆုံး တင်သွင်းသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား အများဆုံးတင်သွင်းသူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်ကုန် ပစ္စည်းများအား ကုန်သွယ်မှုအများ ဆုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုတွင် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် လျက်ရှိပြီးများ မကြာမီနှစ်များအတွင်း၌ ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စာချုပ်များ၌ ပိုမိုပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့များထံတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်ပြီး လျှောက်ထားတင်ပြရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ များစွာရှုပ်ထွေးလျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့်ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှလုပ်ငန်းများ အပြိုင် အဆိုင်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ supply chain များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကြီးမား ကျယ်ပြန့်သည့် ဈေးကွက်ရှိခြင်း၊ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လျက်ရှိခြင်း၊ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်ရှိခြင်း၊ လုပ်သား အင်အားနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းရှင်များလာရောက်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်မည့်အချက်အလက်များ အား ကြည့်ရှု့နိုင်မည့် web link များနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာတင်ပြလိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းရှင်များလာရောက်၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်မည့်အချက်အလက်များအား တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားကောင်စီ၏ တရားဝင် web site ဖြစ်သည့် http:// english.www. gov.cn/servi ces/doing business/2014/08/23/content281474982978400.htm တွင် ဖော်ပြ ထားပြီး အဆိုပါ website တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းများလာရောက်ဆောင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ (Documents required for registration of foreign-funded companies)၊ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေ ဖြင့် ကုန်စည်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား၊ လက်မှတ်များ (Documents and certificates required for business opening registration for foreign (Area) enterprises engaged in production and operating activities within the territory of China)၊ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ လာရောက်အခြေစိုက်၍ ရုံးခွဲများ လာရောက်တည်ထောင်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေး အတွက် လျှောက်ထားတင်ပြရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ (Docum -ents for establishment registration of resident representative offices of foreign (region) enterprises)၊ ပြည်ပမှလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာရုံးခွဲများ လာရောက် ဖွင့်လှစ်ရန်လျှောက်ထားရာ တွင်တင်ပြရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ(Documents required for establishment registration of branches (administrative offices) of foreign-funded enterprise)၊ ကုမ္ပဏီမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲ ရေးဆိုင်ရာ ရုံးခွဲများ လာရောက်ဖွင့်လှစ်ရန် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ (For establishment registration of branches (administrative offices) of foreign-funded enterprises (non-company)) တို့ကို ဖော်ပြထားသည့်အတွက် အသေးစိတ်လေ့လာ ကြည့်ရှု့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူပင် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အဆင့်များ၊ အချက်အလက်များအား https:// www. Sfconsulti ngbd.com/asia/china-foreign-company-registration-wholly-owned/ register-company-china/, https://www.registrationchina.com/set-up-a-company/, https://www.saporedi cina.com/english/how-to-start-a-company-in-china/ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတွက် လိုအပ်သလို ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း ရှာဖွေလေ့လာတင်ပြအပ်ပါသည်။